11 Biyaha qaabab naqshadahaaga ah | Abuurista khadka tooska ah
11 Qalabka biyaha loogu talagalay naqshadahaaga
Arrintan awgeed baakad sameynta biyaha Waxay toosin doontaa xiisahaaga iyo dhiirigelin badan. Marka laga eego aragtidayda shaqsiyadeed, biyuhu had iyo jeer waxay isiiyaan waxyi aad u wanaagsan, habka ay u socdaan, dhaqanka biyaha waxay tusaale u tahay aragtida gabay ee ku saleysan kaliya sameynta sawirrada iyo sarbeebyada laakiin sidoo kale isku dayga inay muujiso astaamaha qotoda dheer ee waxyaabaha.
Marka laga hadlayo biyaha, waxa ugu muhiimsan maahan waxa badanaa ka muuqda "dul sabayn" dusha sare, muuqaalkiisa, laakiin si sax ah asalkiisa, aragtida taxane ah xubno aan la taaban karin ama aan muuqan. Sidaa darteed, waxa ugu muhiimsan Agua waa waxa ku xiran, doomaha, godadka, bangiyada ama khasnadaha, oo ay ku xigto xannaannada sheekooyinka iyo halyeeyada. Sidaa darteed waan kaa tegayaa 10 sawirro biyo ah si aad u siin kartid taabashadaas qaabdhismeedkaaga.
Iyo hadaad rabto ilo badan Shaqadaada waxaan kugu dhiiri galinayaa inaad ka raadiso oo aad ka raadsato qaybta kheyraadkeena, halkaas oo aad ka heli karto wax kasta oo aad raadineyso, sida:
Xirmada Kheyraadka Bilaashka ah (Astaamaha, ..)
Noocyada grunge lacag la’aan ah ee Photoshop
179 Cadayasho Sawir Bilaash ah
Waxaa la ogyahay in biyuhu ay yihiin hantida ugu qaalisan ee aan haysano waana sababtaas darteed dad badan oo naqshadeeyayaal, sawir qaadayaal ama farshaxanlayaal ay ugu daraan naqshadooda, maadaama iyagoon ogaanin ay gudbineyso in cusbooneysiinta marka dabeylaha bada ay ku kala firdhin karaan ama si maldahan u daawashada roob. daaqadda dibedda oo arag dhibcaha ku soo boodaya daaqadda windowsill. Adduun dhan oo dareen leh sawir keliya, waa inaad ogaataa midka aad rabto inaad gudbiso.
Ha iloobin inaad iska qorto joornaalkeena sidaasna aad awood ugu yeelan karto inaad la socodsiiso oo aad cusbooneysiiso dhammaan wararka ku saabsan naqshadeynta garaafka, naqshadeynta websaydhka, casharrada, ilaha garaafyada iyo wararka ku saabsan adduunka naqshadeynta ee aan ku biirineyno beesheena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Textures » 11 Qalabka biyaha loogu talagalay naqshadahaaga
Kheyraadka buufinnada hawo kulul (textures, vectors, burush, sawirro)